Crossword 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny emulator.online
Fantatrao. Ankehitriny dia hasehonay anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hahatakaranao ity lalao tsara ity. Avy amin'ny dikany etymolojika, ny niandohany, ny tombony azony, ny maodelin'ny piozila misy ary koa ny paikady hamahana azy haingana nefa haingana.
Crossword: Fomba filalaovana isa isaky ny teboka 😀
Manao a Fantatrao an-tserasera maimaim-poana, mila fotsiny ianao araho tsikelikely ireto torolalana ireto:
Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no tokony safidio ny fiteny sy ny sokajy tianao indrindra. Anisan'ireo sokajy azonao jerena ny: Voankazo, solosaina, biby Firenena, legioma ary mozika
Ankehitriny, hahita bokotra ilaina ianao. Afaka "Manampy na esory ny feo", Omeo ny bokotra"Play"Ary manomboka milalao, azonao atao"Pause"sy"reboot"Amin'ny fotoana rehetra, Ampitomboy ny haben'ny efijery na hafa lalao hivoahana.
Izy io dia mahavita mampitambatra ireo singa tsirairay amin'ny fomba iray hamoronana ilay sary nofidinao.
Aorian'ny famenoana lalao iray dia kitiho "lalao mivoaka" hanao teny hafa.
¿Ahoana ny fomba famahana teny miafina?🖊
Izahay dia mampiseho aminao tetika valo izay hanampy anao handroso amin'ny fanaovana ankamantatra:
1- Vakio tsirairay ny lalana
Ny zavatra voalohany tokony hataonao rehefa manomboka crossword dia vakio tsirairay ny clue avy any ambony ka hatrany ambany ary ampidiro ihany koa ny vahaolana tsotra. Soso-kevitra ny hanohy amin'ny lalana iray. Havia na havanana na ny mifamadika amin'izany ary avy eo mandroso miakatra sy midina mifanaraka amin'izany. Azonao antoka fa nanoratra ny vahaolana fantatra rehetra ianao.
Raha toa ka tsy maintsy misafidy ireo fanontaniana tsy am-piheverana ianao ary miampita azy ireo angamba boaty tsotra be dia be no mandalo eo alohanao nefa tsy hitanao.
Rehefa nahavita ity fehezanteny voalohany ity ianao dia tokony hiroso amin'ireo fanontaniana sarotra mbola tsy hainao valiana. Izany dia manamora ny fanaovana vinavina amin'ireo kianja ireo ary afaka manomboka mora kokoa amin'ny fihodinana faharoa ianao.
Ankehitriny dia mora kokoa ny mamaly fanontaniana izay manome valiny azo atao marobe fotsiny. Ho ohatra, raha mitady a mpisolo anarana manokana miaraka amina litera 3 , azonao atao ihany ny misafidy ME, YOU, US, sns. Raha efa nahavita litera iray na roa tamin'ny fihodinana voalohany ianao dia azo esorina haingana ny safidy sasany ary amin'ny tranga mety indrindra dia vahaolana iray sisa.
2- Mampiasà marika
Raha mbola be loatra ny safidy valiny amin'ny fanontaniana na, amin'ny ankapobeny, dia tsy azonao antoka tsara ny valiny, Ampidiro amin'ny penina ilay teny hoe flimsy. Raha manohy mamaha ny piozila ianao, dia misy litera maromaro hita amin'ilay teny tadiavinao, dia ho hitanao raha marina na tsia ny eritreritrao voalohany.
Indraindray dia tsara ny miandry mandra-pahatongan'ny litera marobe ho an'ny teny mampiahiahy. Raha iray monja io, ohatra hoe Y ohatra, dia avo loatra ny probabilité ka mbola azo ampiharina ny fiovana marobe. Miaraka amin'izay hihatsara kokoa noho ianao miandry kely kokoa. Raha azonao antoka amin'ny ampahany fa mety ilay teny tadiavinao dia azonao atao ny manara-maso azy tsara.
3- Mialà sasatra🙂
Raha efa ela ianao no niraikitra tamin'ny teny iray ary tsy afaka nandeha namaky teny hafa, dia tsy tokony hatahotra ianao Mialà sasatra. Avy eo apetrakao ilay mistery, esory ny lohanao ary manaova zavatra hafa.
Mahagaga fa ahoana, rehefa afaka fotoana fohy rehefa mamaky fanontaniana indray, tampoka ianao dia misy vokany tsy ampoizina izay namandrika anao teo aloha. Ny antony dia tsy manakiana rehefa mamaha teny hafa. Fehiny: mampiala voly ny fanamby.
4- Tadiavo ny tantara fonony
Tsy ny piozila tsirairay avy dia misy lohahevitra manokana. Bebe kokoa raha misy antony na lohahevitra omena ao amin'ny lohateny, azonao atao ny manantena fa ny ampahany amin'ny fanontaniana sy valiny dia mifantoka tanteraka amin'izany.
Ka tsy midika izany fa mifototra aminy ny teny tsirairay. Manokana, ny teny kely hameno, toy ny mpisolo, fanafohezana, sy ny toy izany dia tsy hiorina amin'ny lohahevitra iray. Fa raha misy lohahevitra Krismasy na ririnina ao amin'ny lohateny dia hazo iray misy litera 5 no mety ho FIR kokoa noho ny OAK.
Manampy manokana izany raha tsy afaka mandroso amin'ny fanontaniana misy valiny mety azo atao ianao. Ka tadidio ao an-tsaina ilay lohahevitra fa hitarika anao amin'ny làlana tsara izy io.
5- Mikaroha teny avy amin'ny fiteny hafa
ny Crosswords matetika koa izy ireo no mitady teny amin'ny fiteny vahiny. Na izany aza, azonao antoka fa amin'ny ankapobeny tsy ho sarotra be mihintsy lexicon io. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, tsy ny fahaizana tsara ilay fiteny hafa no hamahana ny fanontaniana. Mazava ho azy fa maika teny kely izay mety tonga tamin'ny fiteninao tamin'ny fampiasana ankapobeny ny fiteny. Hamarino tsara fa manana litera vitsivitsy amin'ilay teny tadiavinao ianao, dia ho mora kokoa ny maminavina.
6- Fantaro izay karazana teny tadiavinao
Indraindray dia afaka ampiasao ny mariky ny fanontanina hahitanao mialoha izay ampahany amin'ilay adihevitra tokony hosokajina ny vahaolana. Manome anao ny fotoana hanoratanao soa aman-tsara ny fiafarany. Rehefa mitady matoanteny dia matetika ihany no mifarana. Mitovy tanteraka amin'ny teny maro. Raha mitady ny plural ny teny iray ianao, dia azo antoka fa hiafara amin'ny -na sa -s.
Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny mampiditra azy amin'ny litera farany amin'ny teny iray, na dia tsy azonao antoka aza ny teny iray manontolo. Etsy ankilany, ireo litera vitsivitsy amin'ny faran'ny teny dia manampy amin'ny famoahana teny maro kokoa izay miampita azy haingana kokoa. Na izany aza, raha tsy azonao antoka ny hiafarana mety dia soraty izao.
7- Ny dikany marobe amin'ny teny
Amin'ny fanontaniana sasany dia tsy maintsy mijery mihoatra ny indray mandeha ianao. Mety ho ilay mangataha ho azy tsy mazava. Voalohany, noho ny teny iray ao amin'ilay fanontaniana dia mety manana dikany samy hafa, mba ho ohatra any Banco. Raha anontaniana ianao hoe inona no ataonao amin'ny banky dia tokony hoheverinao fa mety hidika hoe banky seza sy banky orinasa ara-bola izany.
Dia afaka ny valiny "mipetraha eo" O ry tsara "manambola vola ".
Misy ihany koa ny fahafaha-manazava ny naoty na ny ohabolana. Indraindray ny fisaintsainana manodidina dia ilaina eto. Aza matetika sy amin'ny fotoana rehetra no mandray ny hevitry ny teny matetika indrindra, fa miezaha ihany koa handinika ambaratonga hafa. Mba ho ohatra iray, raha angatahina amin'ny lalana mankany Roma ianao dia azo antoka fa tsy tokony hanome anarana lalana na lalana manokana ianao, fa ny valiny dia mety ho REHETRA, hoy ilay fitenenana hoe "Mankany Roma ny lalana rehetra".
8- Rehefa tsy misy manampy ...
Raha efa nanaraka ireo torohevitra rehetra ireo ianao nefa mbola tsy afaka mandroso amin'ny teny sasany, dia tsy misy antony tokony hangatahana toro-hevitra sasany. Ho izany tokoa mangataha torohevitra amin'ny namana sasany na olom-pantatra taloha na mampiasa asa soratra nentim-paharazana na nomerika.
Hoe rakibolana, lexicons na rakipahalalana, ny iray amin'izy ireo dia mety ao an-trano. Na izany aza, raha eny am-pandehanana ianao ary mamaha ny teny crossword amin'ny toerana hafa dia afaka misafidy tolotra an-tserasera marobe ho an'ny fanampiana piozila ianao.
Manantena izahay fa nahasoa anao ity fampahalalana ity. Ary, raha mahatsapa ianao fa vonona izao, dia miandry anao hanomboka hanao ny anao izahay Fantatrao.
Inona no atao hoe crossword?📚
ny Crosswords Izy ireo dia fialam-boly mandrafitra andiana efamira tsy misy na inona na inona izay tsy maintsy ataonao amin'ny farany. Mitadiava teny tsirairay avy amin'ny fampiasana ireo torohevitra maimaimpoana. Rehefa vita ny teny sasany, dia miseho ho azy ny litera sasany amin'ny teny hafa, manamora ny famahana azy. Tena fahita amin'ny gazety sy gazette izany ary, noho izany, mahomby amin'ny Internet ihany koa izy ireo.
La Ny fahasahiranana amin'ny zana-teny dia miova arakaraka ny endrika sy ny isan'ny teny. Arakaraka ny maha-kely ny fiampitana ireo teny sy ny isan'ny teny ananan'ny lalao no mampitombo ny vintana fa ho sarotra ny lalao. Ho fanampin'izany, ny haavon'ny fahasarotana dia miova arakaraka ny lohahevitry ny teny fiampitana, koa raha mianatra milalao ianao dia fidio lohahevitra iray tianao sy anananao fahalalana.
Crosswords dia amin'izao fotoana izao iray amin'ireo fialamboly malaza indrindra, na dia very toerana eo alohan'ny lalao hafa toa ny sudoku. Saika tsy misy gazety na gazette tsy misy fizarana fialam-boly izay misy drawbacks iray na maromaro. Tamin'ny firy anefa izy rehetra no nanomboka?
El crossword voalohany izay fantatsika dia nitranga tamin'ny XNUMX desambra XNUMX, izay niavian'ny gazety Alahady World New York nanonta ankamantatra antsoina hoe "Fantatrao", novolavolain'i Arthur Wynne, mpahay tantara anglisy avy any Liverpool. Ny ankamantatra dia nahavoa avy hatrany ny besinimaro ary nanjary mahasarika isan-kerinandro ny famoahana.
Na eo aza ny fahombiazany, World no hany gazety namoaka ity ankamantatra ity hatramin'ny 1924, tamin'ny fotoana namoahan'ny mpitory fanontana fitambarana teny marindrano navoakan'i World tao anaty fotoana, tamin'ny endrika boky. Simon & Schuster nandefa hadalana vaovao izay ho lasa iray amin'ireo mpanonta lehibe indrindra eto an-tany.
Ny tabilao teny- Karazan'akostostika tokana misy andian-taratasy misy an-tsoratra amin'ny takelaka 'takelaka', mba hahafahan'ny teny mitovy mitovy vakina amin'ny lafiny mitsivalana sy mitsangana, nanomboka tamin'ny andro taloha.
Ny razamben'ny Crossword
Ny razambe fantatry ny taloha indrindra amin'ny piozila dia hita tao an-tanànan'i Thebes tao amin'ny fasan'ny mpisoronabe Neb-wenenef voatendry ho amin'izany asa izany tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Ramses II, farao tamin'ny tarana-mpanjaka faha-XNUMX (XNUMX - arivo roanjato talohan'i Kristy). Eo amin'ny ilany havia amin'ny lalantsara mankamin'ny efitranon'ny fasana, a vato lehibe izay nanoratana ny sarin'olombelona sy andian-tsary hieroglyphs.
Ny lahatsoratra dia tsy misy afa-tsy andiam-bavaka mendri-piderana momba an'i Osiris andriamanitra, mpiaro ny maty, toy ny mahazatra tamin'izany fotoana izany. Bebe kokoa ny fomba nandaminana ny hieroglyph dia nahagaga arkeology. Amin'ny ankapobeny dia misy tsipika marindrano iraika ambin'ny folo. Teo afovoan'izy ireo dia nisy tsanganana iray nasiana marika hanondroana fa ny hieroglyphs, vakiana mitsangana, dia misy dikany ihany koa.
Nanomboka teo dia nitohy nitatra nanerana ny planeta, lasa tena ilaina amin'ny gazette na gazety rehetra.
Karazan'ireo teny lakile
Ny crosswords dia samy manana ny karazany. Ireo dia azo sokajiana ho universal, iconic, nominal, negatif, amin'ny fanitarana, ary amin'ny fikafika. Amin'ny tenifototra misy haavo "tsotra", ny famaritana nominal, arahin'ny sikidy. Amin'ireo manana ambaratonga "somary sarotra", dia miverina ny toe-draharaha: ny ny famaritana amin'ny sikidy dia arahin'ilay nominal.
Na izany aza, ny crosswords dia aseho amin'ny sokajy samihafa. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Teny lakile fotsy
Izy io dia karazana tenifototra izay tsy misy kianja mainty, izay tsy maintsy ahitan'ny mpandray anjara ny toerana misy azy.
Mpandika teny na tenimiafina amin'ny fiteny roa
Ity teny crossword ity dia kendrena hianarana a fiteny vaovao.
Izy io dia karazana modality izay tokony hiditra ny boaty tsirairay vaninteny fa tsy litera tokana.
Crossword miaraka amina toetra
Ity karazan-teny marindrano ity dia malaza ankehitriny. Ahitana ny sarin'olona iray izay famaritana iray na maromaro mifanitsy amin'ny anarana na ny anarana mitovy aminy.
Amin'ity fomba tsotra ity mampiasa fehezan-teny manafina torolàlana hananganana na hahitana ny vahaolana eo anelanelan'ny teny amin'ilay fehezanteny. Matetika izy io any Angletera izay misongadina ny tenifototra avy amin'ny The Times.